मलाई सरुवाको डर छैन ! अब नेतालाई पनि छोडिदैन – एसपी राठौर – Life Nepali
मलाई सरुवाको डर छैन ! अब नेतालाई पनि छोडिदैन – एसपी राठौर
चितवन । केन्द्रीय राजधानी नजिकै रहेको चितवन जिल्लामा तीव्र शहरीकरण भइ रहेको छ । जति छिटो पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, त्यति नै बिकृतिहरु पनि भित्रिइरहेको छ। मेडिकल सिटीको रुपमा विकास भइ रहेको चितवनलाई मिर्गौला र सुन तस्करहरुले ट्रान्जिट बनाएको तथ्य पनि पत्ता लागेको छ । त्यति मात्रै होइन, चितवनमा थरिथरिका बिकृति पनि छन् । नेतादेखि अधिकारकर्मीसमेत यौ न धन्दामा संलग्न हुने, भीआईपी जस्तो बनेर महिलाले नै गरगहना चो र्ने, नेताहरुको संरक्षणमा गु ण्डागर्दी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
चितवनका यस्ता चुनौतिको बीचमा प्रहरी प्रमुख बनेर आएका छन् एसपी सुशील सिंह राठौर । जेठ १ गतेबाट चितवन प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका राठौरले थ्री एस (सर्च, स्वीप र स्क्रिनिङ) अपरेसन चलाएको र सीमित जनशक्तिको बाबजुद पनि नसोचेको सफलता पाएको भन्दै दंग छन् ।
जिल्लामा अपराधिक क्रियाकलाप, त’स्करी, चो’री, गु ण्डागर्दी नियन्त्रणमा लिन सफल भएको उनको दाबी छ । दोषि देखिए राजनीतिक दलका नेतालाई समेत नछाड्ने बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक दलले संरक्षण नदिने हो भने, कुनै पनि गुण्डाको दाल गल्दैन । शान्ति सुरक्षा नभएसम्म समृद्धि आउँदैन, नेताहरु भने पनि म छाड्दिनँ, मलाई सरुवाको डर छैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस् – विश्वविख्यात फोर्ब्स पत्रिका लेख्छ : घुम्नका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य’
काठमाडौं। विश्वविख्यात फोर्ब्स पत्रिकाले सन् २०२० मा घुम्नको लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । फोर्ब्स पत्रिकाकी ट्राभल ब्लगर क्याटरिन पार्कर म्यागरले सन् २०२० मा विश्वभरमा घुम्न लायक १० ठाउँमध्ये नेपाललाई पहिलो नम्बरमा राख्दै यहाँको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाललाई धर्तीकै उत्कृष्ट साहसिक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाल साहसिक यात्रा रुचाउनेहरुका लागि र शान्त ठाउँमा डुल्न चाहने दुवैका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएको फोर्ब्समा उल्लेख छ । नेपालका होटल तथा रिसोर्टमा पाइने न्यानो आतिथ्य र खानाका परिकारले पनि यात्रा झनै रोमाञ्चक हुने पनि लेखमा उल्लेख छ । फाप्लुको ह्याप्पी हाउस र बर्दिया निकुञ्जको कर्णाली लज जानैपर्ने होटल रहेको पनि फोर्ब्समा लेखिएको छ ।
नेपालको यात्रा दक्षिणतर्फबाट सुरु गर्नुपर्ने र चितवन, बर्दिया लगायतका राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा, हात्ती, बाघ लगायतका वन्यजन्तुको अवलोकनले यात्रा रोमाञ्चक हुने पनि दावी गरिएको छ । २-४ दिन बसेमा यी ठाउँले छाड्नै मन नलाग्ने बनाउने पनि लेखमा उल्लेख छ ।
तराइकोे यात्रापछि पहाड र हिमालतिर लाग्दा यात्रामा स्वर्गीय आनन्द आउने पनि लेखमा छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने ट्रेकिङ, टेन्टकाे बसाइ, आत्मीय गाइड लगायतले नेपालको यात्रा सधैं सम्झनलायक बनाउने पनि फोर्ब्सको लेखमा उल्लेख छ । फोर्ब्समा उल्लेख भएका बाँकी ९ वटा गन्तव्यमा इक्वेडर, न्युजिल्याण्ड, पेरु, अलास्का, ब्राजिल, मोरक्को, चीन, फिनल्याण्ड र केन्या रहेका छन् ।
Previous इटहरी ,बिराटनगर, इनरुवा हुदैँ काकडभिट्टा सम्म रेल कुदाउने ओली सरकारको तयारी
Next विश्वको घुम्नैपर्ने देशको सुचिमा नेपाल पहिलो नम्बरमा !